maninona ny fantsona vinyl - Vinylpipe
Mila mahazo fantsona uPVC kalitao amin'ny vidiny mety ianao, atolotra anao amin'ny fotoana mety; isaky ny mila azy ireo ianao. Io fahatokisana io ihany no ahafahanao mitantana ny orinasanao. Ary ny Vinyl dia mpiara-miasa izay hiantoka ny kalitao, ny fandefasana fotoana ara-potoana, tsy tapaka.
Nahoana no matoky ny indostrian'ny fantsakana rano erak'izao tontolo izao ny Vinyl?
Fahatakarana ny mpanjifantsika sy fihainoana azy ireo
Ity no toetra tokana manan-danja indrindra izay ananan'i Vinyl amin'ny ekipa iray. Mihaino ny fangatahan'ny mpanjifa, ny filany, ny fampiharana ary ny tolo-keviny izahay. Izany dia nahatonga anay mpamatsy tianay kokoa ho an'ireo mpaninjara 100+ any amin'ny firenena 44. Na izany dia fitakiana driller na distributor na koa fangatahana spec teknolojia ho an'ny tenders dia manandrana mitondra ny tsara indrindra ao aminay izahay.
Ny orinasan'i Vinyl dia orinasa voamarina ISO 9001 ary mamokatra fantsona ihany koa isaky ny fenitra BIS sy RoHS. Ho an'ny famatsiana any amin'ny firenena hafa, manaraka ny fenitra voafaritra manokana ny Vinyl.
Ny fantsom-boalavo vinyl dia vita amin'ny virijiny PVC avo lenta sy fitaovana uPVC mifangaro ao an-trano. Ny translucence avoakan'ny fantsona Vinyl dia porofon'ny hatsarany, satria tsy misy fahalotoana. Ny fizotran'ny vinyl dia manome antoka fa ny ampahany mety amin'ny additives dia asiana mba hanamboatra ny fantsona.
Ny fantsom-boalavo vinyl dia mizaha kalitao matetika momba ny refy ara-materialy sy ara-batana. Izy ireo koa dia sedraina noho ny tanjaka mihombo, ny tanjaka mihosin-tsofina ary ny tsindry mafy.
Tambajotra mizara be
Ny Vinyl dia manana tambajotram-pifanakalozana manerantany izay andefasana kojakoja mahazatra araka ny baikon'izy ireo. Ao India, ny Vinyl dia manana sampana maro sy stocking point izay mitandrina ny fizarana manerana ny firenena.